15 Elula Futhi Enhle Yezandla Enovolo | Imisebenzi yezandla ivuliwe
Elizabeth Catalan | 05/11/2021 19:00 | Yezandla ngendwangu, Ubuciko nezinto zokwakha
Uboya buyinto engasizi nje kuphela ukunitha izingubo ezinhle njengezigqoko, amajezi, izikhafu noma amagilavu, kodwa futhi inikeza ukudlala okuningi lapho udala imisebenzi yezandla. Uke wacabanga ukwenza uboya bezandla? Kuyinto engabizi futhi kulula ukuyithola ongayithola noma yikuphi.
Ama-pompom, izindandatho ze-napkin, amathoyizi, amaketanga okhiye, amabhande asekhanda… kukhona amathuba amaningi! Uma ufuna ukuzama into entsha efana noboya futhi uthuthukise konke ubuhlakani bakho, ngincoma ukuthi ubheke lezi zezandla eziyi-15 ezinoboya ozozithola ngezansi. Kukhona zonke izinhlobo namazinga obunzima futhi ngokuqinisekile kuzoba yinto entsha oyithandayo. Iyiphi kuzo ozoqala ngayo?
1 Isiphathi se-napkin se-pompom
2 Unogwaja onompompo boboya
3 Igoda lokuhlobisa
4 Ibhande lasekhanda elinezindlebe zepompo lokwenza nezingane
5 Inunu enepomponi
6 Ibhodlela elihlotshiswe ngezintambo noboya
7 Uzimele ohlotshiswe ngezintambo noboya
8 Iketango lokhiye elenziwe ngamapompomu
9 Ichwane elenziwe ngamapompomu
10 Ihhashi elilula elinokhokho noboya
11 U-Snowman ophethe i-clothespin
12 Kiwi woolen
13 Ikhekhe loboya
14 Uyenza kanjani idoli ye-octopus ngoboya
15 Indlela yokwenza i-wool pom pom keychains
Isiphathi se-napkin se-pompom
Lezi pompom napkin izindandatho Zingomunye wemisebenzi yezandla yewulu elula ongahlobisa ngayo amalineni etafula, kungaba ngeyakho indlu noma ukunikeza njengesipho uma ufuna ukuba nemininingwane nezivakashi zakho.
Alungiswa nge-jiffy futhi kukhona izinto ezimbalwa ozozidinga: uboya obunemibala, imfoloko, ukhuni, intambo noma izindandatho zepulasitiki kanye nesikelo. Ungabona ukuthi lo mnikazi we-napkin we-pompom wenziwa kanjani kokuthunyelwe I-pomkin pom, enhle futhi elula.
Unogwaja onompompo boboya
Ukuze uchithe isikhathi esithile ukuzijabulisa ekhaya ungenza lokhu nice unogwaja ngoboya. Uma uthanda umbono, ungenza imibala eminingana ehlukene futhi uyinikeze noma uyigcine ukuhlobisa amakamelo. Ngaphezu kwalokho, ingenye yezandla zoboya ezifanele kakhulu okufanele zenziwe ngesikhathi seholide lePhasika.
Njengezinto ezisetshenziswayo kuzodingeka uthole uvolo wemibala emibili (yomzimba, umsila kanye namafinyila), amehlo omsebenzi wezandla noma amabhola, amakhadibhodi noma imizwa enemibala, isikele kanye nesibhamu seglue esishisayo. Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe, bheka isihloko Unogwaja onompompo boboya.
Uma ufuna ukunikeza ukuthinta okuhlukile kwezinye izinto onazo ekhaya njengamashalofu, obhasikidi noma izinto ezimaphakathi, umqondo omuhle ukwenza lokhu kube kuhle. i-pompom garland. Uma unesikhathi esincane samahhala, khipha noma iyiphi intambo onayo endaweni yokugcina, imfoloko, isikelo, namanye amalambu entambo ye-LED.
Lona omunye wemisebenzi yezandla elula kakhulu, ngeke kukuthathe isikhathi eside ukuyiqeda. Unazo zonke izinyathelo kokuthunyelwe IPomom garland.
Imisebenzi yezandla yoboya ingasetshenziswa ukwenza izesekeli zezinwele. Isibonelo salokhu yilesi ibhande lendlebe le-pompom. Umphumela omuhle futhi ojabulisayo. Ukuwenza uzodinga uboya bemibala emibili, isikelo, amakhadibhodi noma irabha ye-eva, ibhande lekhanda elibushelelezi kanye nekama. Ungabona ukuthi ikhiqizwa kanjani isinyathelo ngesinyathelo esihlokweni Ibhande lekhanda elinezindlebe ze-pompom ezinoboya.
I-Halloween yisikhathi esihle sokwenza imisebenzi yezandla ngoboya ngesimo se isilo. Izingane zizojatshuliswa futhi zizojabula isikhashana ziwulolonge. Uma isiqediwe, bangayibeka eshalofini noma bayinikeze ukuze bayilengise kubhaka noma esibukweni semoto esibonisa ngemuva. Ziningi ukusetshenziswa kwalo!
Yiziphi izinto ozozidinga? I-primordial, uvolo onemibala. Futhi irabha enegwebu, ebomvana noma emnyama ezwakala emlonyeni wesilwane esisabekayo, amehlo obuciko, imfoloko, isikelo kanye neglu. Ungabona imiyalo yaleli bhukwana ngokuchofoza ku- I-Pompom Monster.
Ibhodlela elihlotshiswe ngezintambo noboya
Ngobuciko obulandelayo ungasebenzisa ngokunenzuzo labo amabhodlela engilazi onakho ekhaya ukuze ulahle udoti futhi uzame ukubanikeza impilo yesibili ngokuwahlobisa ngoboya nezintambo ukuze uguqule amavase noma ama-vases. Ngomsebenzi wezandla woboya uzokwazi ukunikeza ikhaya lakho ukuthinta okuyingqayizivele!
Izinto ozozidinga yilezi: amabhodlela engilazi, izintambo, uvolo onemibala, isikele kanye ne-silicone eshisayo. Uma usuwatholile, into kuphela ozoyidinga ukwazi indlela yokukhiqiza. Thola kokuthunyelwe Ibhodlela elihlotshiswe ngezintambo noboya!
Uma ufuna ukunikeza ukuthinta okuhlukile emhlobiso wendlu yakho, ngoboya obuncane nentambo ongayenza ifreyimu yesithombe original kakhulu usebenzisa ngokunenzuzo ezinye ezindala osukhathele kakade. Ungomunye wemisebenzi yezandla ewuboya olula ukuyenza omphumela wayo upholile kakhulu.
Thola uhlaka, intambo, uvolo onemibala, i-silicone eshisayo, nesikele. Emizuzwini embalwa uzobe usuzuze uhlaka oluhle lapho ungabeka khona izithombe ozithanda kakhulu. Uma ufuna ukwazi ukuthi kwenziwa kanjani, ungaphuthelwa okuthunyelwe Uzimele ohlotshiswe ngezintambo noboya.
Iketango lokhiye elenziwe ngamapompomu
Ingabe ulahlekelwa okhiye bakho kalula noma kukhona omaziyo okwenzeka kuye? Ngalokhu pom pom keychain ngeke kuphinde kwenzeke. Uma usuvele unolwazi ngemisebenzi yezandla zoboya, kuyoba lula kakhulu ukuyenza. Awudingi ngisho nezinto eziningi zokwakha, intambo enemibala nje ukwenza amaphommu, iringi yokhiye, imfoloko nesikelo.
Njengoba ubona, kuwumsebenzi olula futhi omuhle kakhulu. Imininingwane ozobukeka kahle ngayo uma ufuna ukuyipha njengesipho. Ukuze ubone ukuthi kwenziwa kanjani, ngincoma ukuthi ufunde isihloko I-pom pom keychain yosuku lomama.
Ichwane elenziwe ngamapompomu
Kungakhathaliseki ukuthi njengeketango lokhiye, njengomhlobiso wojosaka noma isibuko esingemuva semoto, leli tshwele elinamapompomu lingenye yezithandwa kakhulu. uboya bezandla okujabulisa kakhulu ukukwenza nezingane. Bayoba nenjabulo yokufunda ukwenza leli tshwele elincane elihle!
Izinto ozozidinga ezinye zalezo ezisetshenziswa kweminye imisebenzi yezandla njengoboya obunemibala, isikele, igwebu, amehlo obuciko, ubuhlalu obunobukhulu obuhlukene kanye ne-silicone eshisayo. Thola ukuthi kwenziwa kanjani ngaphakathi Chick nge pom pom.
Ihhashi elilula elinokhokho noboya
Okulandelayo kungenye yalezo zandla zoboya ezilungele ukwenza nezingane, njengoba zizothanda ukuzakhela ithoyizi nokuba nesikhathi esimnandi. Ukuze ukwenze, kuzodingeka ukuthi uthole amakhokho ambalwa emabhodleleni ewayini, uvolo onemibala, intambo ecinene yezinsombo. ihhashi, indwangu yevelvet yesihlalo, isikelo nesibhamu seglue.
Uma ulandela zonke izinyathelo ozozithola kokuthunyelwe Ihhashi elilula elinokhokho noboya ngokushesha uzoba nethoyizi elimangalisayo nelijabulisayo.
U-Snowman ophethe i-clothespin
Ngezinsalela ozishiyile ekwenzeni eminye imisebenzi yezandla ngoboya ungenza lokhu kube mnandi U-Snowman ukuhlobisa ilondolo yakho. Kuzothatha imizuzu embalwa kuphela! Ngaphezu kwalokho, itimu ifaneleka kakhulu ngenkathi yasebusika.
Njengezinto zokwakha kuzodingeka uqoqe izigqoko zokugqoka zokhuni, upende omncane omhlophe, umaka omnyama, isikelo, iglue kanye noboya obunemibala. Thola ukuthi kwenziwa kanjani ngaphakathi U-Snowman ophethe i-clothespin!
Ngobuciko obulandelayo ungathuthukisa konke ubuhlakani bakho lapho wenza izithelo ngoboya. Lesi sikhathi yi-a kiwi kodwa ungakha kabusha cishe noma yiziphi izithelo ongazicabanga: ama-strawberry, amawolintshi, amakhabe ...
Kuvidiyo echazayo Kiwi woolen uzobona ukuthi kwenziwa kanjani isinyathelo ngesinyathelo. Yiba novolo onsundu, oluhlaza okotshani, omhlophe nomnyama esandleni, isikelo nekhadibhodi kanye… nesenzo!
Uma uthanda ukwenza imisebenzi yezandla ngoboya, ngikwethulela umbono ongaba muhle kakhulu ukuwunikeza ngezinto zasekhishini noma ukuhlobisa indawo ethile yendlu: amakhekhe oboya. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukunamathisela amehlo izikebhe kubo ukuze anikeze umoya kumnandi kakhudlwana.
Isici esiyinhloko ozosidinga uboya kodwa hhayi kuphela. Futhi iphepha lekhekhe, imfoloko, isikele, iglue, namehlo obuciko (uyazikhethela). Kuwumsebenzi wezandla olula kakhulu odinga izinyathelo ezimbalwa kuphela. Ungazibona ngokuchofoza Ikhekhe loboya.
Kwesinye isikhathi eminye imisebenzi yezandla yoboya ayinzima kakhulu kunalokho ibukeka ngakho-ke kufanelekile ukuzama izinto ezintsha. Kunjalo nalokhu ingwane ngoboya. Inikeza umbono wokuthi kuwumsebenzi wezandla oyinkimbinkimbi kodwa akunjalo.
Njengezinto zokwakha uzodinga uvolo, ibhola le-aluminium foil, isikelo, izinkinobho, izinaliti nezinye izinto ezimbalwa. Ungabona amanye amathuluzi nokuthi kwenziwa kanjani kokuthunyelwe Uyenza kanjani idoli ye-octopus ngoboya.
Indlela yokwenza i-wool pom pom keychains
Amaketango angukhiye angobunye ubuciko boboya ongayenza ukuze ujabulele isikhathi sokuzijabulisa. Le modeli ye-pompom yinhle kakhulu futhi yenziwa ngokuphazima kweso. Ngaphezu kwalokho, ungayisebenzisa ukuhlobisa izikhwama nezikhwama.
Ukwenza wool pom pom keychains Kufanele uqoqe lezi zimpahla: uvolo ngemibala ehambisanayo, imfoloko, isikelo, amakhadibhodi, namasongo okhiye.
Inqubo yokukhiqiza ilula kodwa uma ungakaze wenze i-keychain ngaphambi kokuthi ubone ukuthi ufunda kanjani Indlela yokwenza i-wool pom pom keychains.
Indlela ephelele ye-athikili: Imisebenzi yezandla ivuliwe » Ubuciko nezinto zokwakha » Yezandla ngendwangu » 15 ubuciko obulula futhi obuhle ngoboya
Uyazazi zonke izinhlobo nezinzuzo zamakhethini aseVenetian?